Re कारणहरू B5B मार्केटरहरूले उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा बोटहरू समाहित गर्छन् Martech Zone
इन्टरनेटले बोटलाई सफ्टवेयर अनुप्रयोग हो भनेर वर्णन गर्दछ जसले इन्टरनेटमा कम्पनीहरूका लागि स्वचालित कार्यहरू चलाउँछ।
बट्स अहिले धेरै समयको लागि थिए, र तिनीहरू पहिले जस्तो देखि विकसित भएको छ। बोटहरू अब विभिन्न उद्योगहरूको सूचीको लागि कार्यहरूको विस्तृत एर्रे पूरा गर्न खटाइएको छ। चाहे हामी परिवर्तनको बारेमा सचेत छौं कि छैनौं, बट्स यसको एक अभिन्न हिस्सा हो मार्केटिंग मिश्रण हाल।
बोट्सले लागत घटाउन र दक्षता सुधार गर्नका लागि ब्रान्डको लागि उपयुक्त समाधान प्रदान गर्दछ। जब तिमी एक अनलाइन व्यापार शुरू गर्नुहोस् र डिजिटल मार्केटिंगमा जान, तपाईं अनजाने विज्ञापन, पदोन्नती, बिक्री र प्रतिक्रिया मा तपाईं अधिक भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। बोट्स सेटअप गर्न अत्यन्त सस्तो हुन्छ र सजीलै प्रोग्राम गर्न सकिन्छ।
तिनीहरूको सुविधा र अन्तिम लाभको कारण, मार्केटिंग बट्स एक लोकप्रिय रूप हो बजारका लागि स्वचालन आज बुट्स मूलतः तपाईंको आफ्नै मार्केटिंग खेलौना हो जुन तपाईं तिनीहरूबाट चाहानु भएको कुनै कार्य गर्नको लागि प्रोग्राम गर्न सकिन्छ।
मानव त्रुटि न्यूनतम गरिएको छ र घडी वरिपरि प्रभावकारी अपरेशनहरू गन्ट्ठाको प्रयोगबाट ग्यारेन्टी हुन्छ।
के तपाईं आफ्नो डिजिटल मार्केटिंग अभियान स्वचालित र कम त्रुटिहरू मेट्ने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईं बोटहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने फाइदाहरूबाट प्रेरित हुनुहुन्छ?
यदि हो, त्यसो भए तपाईं सही पृष्ठमा हुनुहुन्छ।
यस लेखमा हामी सम्भावित तरिकाहरू हेर्छौं जुन B2B विपणकहरूले आफ्नो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति भित्र बाट्स समावेश गर्न अनुसरण गर्न सक्दछन्।
यो लेख को माध्यम बाट पढ्नुहोस् र एक कुशल र एक लागत प्रभावी भविष्य को लागी तपाइँको मोडस अपरेंडी निर्धारित गर्नुहोस्।
कारण १: पर्यटकहरूसँग कुराकानी गर्न उपकरणको रूपमा बोट्स प्रयोग गर्नुहोस्
यो एक सबै भन्दा राम्रो दस्तावेज र लोकप्रिय bot कार्यहरू छनौट गर्नको लागि हो। प्रक्रियाले तपाईंको हातहरू बाट कामको भारी मात्रा लिन सक्दछ र तपाईंको फाइदाको लागि तयारी गर्न सक्दछ जुन तपाईंको मार्गमा आउँदछ।
डिजिटल मार्केटिंगले ब्रान्डलाई ग्राहकहरुसँग पहिलो पटक कुराकानी गर्ने तरीकामा क्रान्ति ल्यायो।
फेस अनुहार संचार अब कुनै आदर्श होईन, र व्यवसायले तिनीहरूको पहिलो प्रभाव अनलाइन सेट गर्दछ आफ्नो वेबसाइटको दृष्टिकोणबाट र यसमा रहेको सामग्री मार्फत।
जब ग्राहकहरू तपाईंको वेबसाइटमा पहिलो पटक आउँदछन्, तिनीहरूलाई मात्र सही ग्राफिक्स र सौंदर्यशास्त्रको आवश्यक पर्दैन, तर तिनीहरूलाई प्रदान गरिएको सबै सान्दर्भिक जानकारी पनि आवश्यक पर्दछ।
संक्षिप्तमा, तिनीहरू उत्पादन र सेवाहरूका लागि उत्तरहरू चाहन्छन्, कुनै पनि सान्दर्भिक छुट वा प्रोमोहरूको विवरणको साथ। तपाईंको यी उत्तरहरू दिन असक्षमताको मतलब यो हो कि तपाईंले सम्भाव्य रूपमा ग्राहक हराउनुभएको छ।
सबैलाई मद्दत गर्दै सम्भावित ग्राहकहरु एक प्राथमिकता हो जुन तपाईसँग सानो बिक्री वा समर्थन टोली छ जब कायम राख्न र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
साथै, तपाईंको टोलीसँग काम गर्ने समयहरू छनौट हुनेछ, त्यसपछि ग्राहकहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन कोही पनि उपलब्ध हुँदैन।
तपाइँको स्टाफलाई फरक कामका घण्टामा दिईनुको मतलब भनेको तपाईले एक समय मा उपलब्ध जनशक्ति कम गर्नुपर्नेछ।
यसले प्रभावी ढंगले दक्षतामा बाधा पुर्‍याउँछ र प्रश्नहरू सोध्ने ग्राहकहरूको इनफ्लो व्यवहार गर्न असमर्थ हुन्छ।
यो धेरै जसो समकालीन मार्केटरहरूको लागि आश्चर्यको रूपमा आउन सक्छ, तर ग्राहकहरूले साँच्चिकै लाइभ च्याटको प्रशंसा गर्दछन् जसले उनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।
इकोन्सल्टन्सी द्वारा हालैको एक सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि लगभग 60 प्रतिशत व्यक्ति एक वेबसाइट मा प्रत्यक्ष कुराकानी रुचाउँछन्।
तपाईं थप बट्स मार्फत सन्देश बनाउन सक्नुहुनेछ प्रतिक्रियाहरूमा काम गरेर बढी मानवीय।
प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र जवाफहरू विकास गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्डि and र उत्पादन प्रतिष्ठाको साथ पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्।
व्यक्तिहरू कडा बोटसँग अन्तर्क्रिया गर्ने सम्भावना कम हुन्छ जुन उनीहरूलाई साँच्चिकै ग्रहण योग्य हुँदैन। तपाईं आफ्नो बोटलाई अधिक प्रोफाईल फोटो र डिस्प्ले तस्वीर दिएर यसलाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ।
यी थपिएकोले तपाईंको बोट र ग्राहकहरू बीचको सञ्चारलाई बढाउने छ यसलाई बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाएर।
अन्तरक्रियाशीलताको बारेमा कुरा गर्दै, सेफोरा च्याटबट ग्राहकलाई राम्रोसँग अन्तर्क्रिया गर्ने बोटको उत्कृष्ट उदाहरण हो। बोट द्वारा प्रयोग गरिएको टोन आकर्षक छ र यसले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको सम्झौता सील गर्न मद्दत गर्दछ।
कारण २: तपाईंको नेतृत्वको माध्यमबाट सिफ्ट गर्न बट्सको प्रयोग गर्नुहोस्
नेतृत्व प्रबन्धन प्रबन्धकहरू र मार्केटि teams टोलीहरूलाई प्रबन्ध गर्नका लागि एउटा जटिल कार्य हो। सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईंको सहज ज्ञान र निर्णयमा आधारित छ।
तपाईको मार्केटिंग टोलीको सदस्यको रूपमा तपाईले सही कल गर्नु भयो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ जसको बारेमा बढि दृढतापूर्वक अनुसरण गरिन्छ र कुन ड्रप हुन्छ।
च्याटबटहरूको प्रयोगका माध्यमबाट तपाई यी कलहरूमा धेरै अधिक निश्चितता थप्न सक्नुहुन्छ। सहज ज्ञान गलत प्रमाणित गर्न सक्दछ, तर एक लीड योग्यता गर्न च्याट बट्स द्वारा चलाइएको एनालिटिक्स एकदम कम नै गलत हुन्छ।
तपाईंको अनलाइन वेबसाइटमा एक नयाँ ग्राहक आउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस्। केहि विन्डो शपिंग हुन सक्छ, अरूलाई चासो लाग्न सक्छ।
तपाइँको ग्राहकहरूको गतिशीलता र जनसांख्यिकीलाई ध्यानमा राख्दै, तपाइँ तपाइँको ग्राहक बीचमा छ कि छैन निर्धारण गर्न रोचक प्रश्नहरूको सूची प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। बिक्री भित्ता कि हैन।
यी प्रश्नहरूको जवाफले तपाईंलाई पछ्याउनुपर्ने नेतृत्व निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ प्रोग्राम गरिएको बोटहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईंको लागि यो काम गर्दछ। यी बोटहरूले प्रश्नहरू तयार पार्न मद्दत गर्दछ र त्यसपछि तिनीहरूलाई उत्तरहरू विश्लेषण गर्दछ जुन नेतृत्व लिने अनुसरणयोग्य हो कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न। ड्राफ्टबोट बाट ड्राफ्टबोट यहाँ प्रमुख विकल्प हो यदि तपाईं यस प्रकारको सफ्टवेयरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
जबकि बट्सले योग्यता र नेतृत्वको पालनपोषण गर्न वास्तवमै राम्रो काम गर्न सक्दछ, प्रक्रियाको प्रबन्ध गर्ने उत्तम तरिका भनेको सम्झौताको अन्त्यमा मानवीय सम्पर्क जोड्नु हो।
अगाडि सबै भन्दा उत्तम तरिका भनेको बट्सलाई पोषण र नेतृत्वको लागि योग्य हुन र त्यसपछि सम्झौता नजिकै छ जब एक मानवीय चरण छ।
प्रक्रिया आउने समयको लागि तपाईंको डिजिटल बिक्री रणनीति परिभाषित गर्न सुव्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यो सजिलो छ र तपाईं पुरस्कार कटनी गर्नेछ।
कारण:: प्रयोगकर्ता अनुभवलाई व्यक्तिगतकरण गर्न बट्सलाई एक साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
भर्खरको अनुसन्धानले फेला पारे 71 प्रतिशत सबै ग्राहकहरूको निजीकृत रणनीति रुचि।
वास्तवमा, ग्राहकहरू निजीकरणको लागि बाँचिरहेका र मर्छन्, किनकि यसले उनीहरूमा स्पटलाइट राख्छ। वर्षौंदेखि, ब्रान्डहरूले उनीहरूलाई सुविधाजनक लाग्ने चीजहरू बेच्दै आएका छन्, यद्यपि ज्वार अहिले परिवर्तन भएको छ र ग्राहकलाई के बेचिन्छ र मार्केटिंग के हो निर्धारण गर्ने समय आइसकेको छ।
निजीकरण तर्फ ग्राहक उन्माद मनमा राख्दै, यो ध्यानको साथ प्रदान गर्न तपाईं आफैले यसलाई लिनु पर्छ। बोटको प्रयोगको साथ, तपाइँ तपाइँका आगन्तुकहरूलाई ग्राहक केन्द्रित प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ।
सीएनएन एक शीर्ष समाचार च्यानलको उदाहरण हो जुन उनीहरूको रुचि र विकल्पहरूको आधारमा बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुकूलित समाचार फिडहरू पठाउँदछ।
यसले सकारात्मक स्थान सिर्जना गर्दछ र ग्राहकहरूलाई उनीहरूसँग सम्बन्धित सबै समाचारका लागि समाचार प्रदायकमा भरोसा गर्न मद्दत गर्दछ।
संरचनात्मक रूपमा एक अग्रणी अनलाइन एआई समाधान हो जुन रियल ईस्टेट टीम, दलाली र एजेन्टहरू आफ्ना ग्राहकहरूको लागि व्यक्तिगत उत्तरहरूको विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
संरचना अन्तर्गत च्याटबट आइसा होम्सको नामबाट जान्छ र बिक्री अभिकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ। ऐसा होम्सले ग्राहकलाई चिन्ने र तिनीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ निजीकृत स्वरमा दिन्छ।
कारण:: प्रभावी सामाजिक मिडिया संचारको लागि बट्स प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडियामा बटहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ग्राहकलाई जवाफ दिन र त्यस्तै समर्पण र अनुकूलनको साथ अन्तर्क्रियाको लागि जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा गर्नुहुन्छ।
स्लाक र फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईको सन्देश पठाउनको लागि धेरै च्याटबोटहरू उपलब्ध छन्। सामाजिक मिडिया बट्स लीड जेनरेशनको लागि उत्तम रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र तिनीहरू त्यो उद्देश्यको राम्रोसँग सेवा गर्दछन्।
कारण:: बोत्साहरू डेमोग्राफिक्स निर्धारणको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
बट्सले तपाईको ग्राहकलाई आवश्यक डेमोग्राफिक प्राप्त गर्नका लागि एक लामो अन्तर्क्रियात्मक तरीका प्रदान गर्दछ, तिनीहरूलाई लामो र बोरिंग फारमहरू भर्न नसोधेर।
बोटले तपाईंको ग्राहकहरूसँग एक सुपर क्याजुअल तरीकामा अन्तर्क्रिया गर्दछ र उनीहरूको डेमोग्राफिक्समा सान्दर्भिक जानकारी उत्पन्न गर्दछ।
यो जानकारी त्यसपछि प्रस्ताव गर्न प्रयोग गरिन्छ निजीकृत बिक्री रणनीतिहरु ग्राहकहरु लाई। यी बिक्री रणनीतिहरू तपाइँको ब्रान्डको लागि नयाँ ग्राहकहरू ल्याउनको लागि एक राम्रो तरिका हुन सक्छ।
कुराकानीले धेरै ग्राहकहरूको लागि सुरक्षित ठाउँ प्रदान गर्दछ जहाँ उनीहरू असुरक्षित महसुस नगरी उनीहरूको जनसांख्यिकीय सम्बन्धित जानकारी साझा गर्न सक्दछन्।
तपाईं नयाँ अवसर ल्याउन र पुरानोबाट जनसांख्यिकी सम्बन्धित डाटा प्राप्त गर्न यो अवसर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अब हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले च्याटबट्सको महत्त्व बुझ्नुहुनेछ र कसरी तपाइँ तपाइँलाई आफ्नो मार्केटिंग रणनीतिमा सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिंग भनेको अनौपचारिक हुनु र तपाईको ग्राहकहरुसँग बन्धहरु बनाउने बारेमा हो।
च्याट बट्सले तपाईंलाई त्यो अवसर प्रदान गर्दछ, किनकि यसले तपाईंलाई क्षितिजहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जुन अन्यथा तपाईंको लागि धेरै टाढा ल्याइएको थियो।
मार्केटि teams टोलीहरूले बोटको साथ हात-बाट कार्य गर्न सक्दछन् विशाल डिजिटल मार्केटिंग रणनीति बनाउन।
अन्तर्क्रियात्मक र २ots घण्टा बोटको सेवा तपाईंको मानव स्टाफको विशेषज्ञताको साथ राम्रोसँग चल्नेछ। यस अमलगममार्फत तपाईं अधिक बिक्री अवसरहरू र मार्केटि auto स्वचालनको पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
के तपाईं आफ्नो मार्केटिंग रणनीति भित्र बोट्स समावेश गर्न मा आफ्नो भाग्य कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि हो भने, त्यसपछि तल टिप्पणी दिनुहोस् हामीलाई कसरी थाहा दिनुहोस् कसरी हाम्रो प्रविधिको तपाईं आउन यात्रा मा मद्दत गर्न सक्छन्।
टैग: b2bBotsच्याट बोट्सनेतृत्व पुस्तानेतृत्व योग्यतानेतृत्व योग्यतानेतृत्व योग्य
एलेक्स मा डिजिटल मार्केटिंग प्रबंधक हो विश्वसनीय सफ्टवेयर, २००२ देखि एसईओ र डिजिटल मार्केटिंग सेवाहरू प्रदान गर्ने डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी।
W तरीका मेशिन शिक्षा सामाजिक मीडिया मार्केटि En बढाउँदै छ